पत्रपत्रिकाबाट Archives - Page 278 of 308 - Samudrapari.com
ब्राजिली छोरीको पीडा : लिलामीमा कुमारीत्व
ब्राजिल- बिमारीले अशक्त बनाएपछि आमा ओछ्यानमा छटपटिएकी छन् । उपचारखर्च जुटाउने सामर्थ उनीहरूसँग छैन । जीविका टार्नै धौ–धौ पर्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरू एक्स्ट्रा खर्च त अलिकति पनि निकाल्न सक्दैनन् । न सहयोग गर्ने आफन्त छन् न त रकमको जोहो गर्न सक्ने अन्य विकल्प । दैनिक काम गरेर आएको रकमले आमाको उपचारको एक छेउ पनि भेट्दैन । यस्तो अवस्थामा एक किशोरी छोरीले केचाहिँ गर्न सक्ली र ? आफन्त गुहार्ली वा साहुसँग झोली फिँजाएर ऋण माग्दै आमाको जीवनदानको अपिल गर्ली । तर, ब्राजिलकी एक किशोरीले आमाको जीवनरक्षाका ल...
विवाहको जन्जिरबाट मुक्त छु”
-ममता गिरी, एमाले नेतृ २०४७ सालको आन्दोलन भर्खरै सकिएको थियो । वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट विद्यार्थी राजनीति थालेर भर्खरै महिला राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकी थिएँ । मेरो परिवार पञ्च कांग्रेस । म भने नेकपा (एमाले) को कार्यकर्ता । छोरी राजनीतिमा सक्रिय भएको उहाँहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । त्यसमाथि हुर्केकी छोरी बिहे गर्ने बेला आन्दोलनमा रातसाँझ हिँडेको कुन परिवारले रुचाउला † मैले आइए पनि सकिसकेकी थिएँ । मलाई पत्तै नदिई दाजु र आमा मिलेर गाउँकै एक युवकसँग मेरो बिहे पक्का गरेछन् । आफ...
पहिले भाँडा माझें, पछि चुनाव लडेँ
-दर्शन रौनियार अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीका स्थानीय नेता/उद्यमी म जन्मँदा इन्द्रचोक अहिलेको जस्तो थिएन । तैपनि, इन्द्रचोकको रमझम व्यस्तता भने त्यतिबेलाको हिसाबले निक्कै नै थियो । सन् १९६८ को नोभेम्बरमा म जन्मिएँ । सानोमै बुबा बित्नुभयो । मेरो रेखदेखदेखि पठनपाठनसम्मको सबै जिम्मा आमा मनोरमाको काँधमा आयो । अझ मामाघरको हजुरआमाले मेरो रेखदेख धेरै गर्नुभयो । स्कुल पुर्‍याउनेदेखि ल्याउनेसम्मको सबै काम उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको आँखा अगाडिबाट एकछिन पनि म हराएको उहाँलाई मन पर्दैनथ्यो भन्दा पनि ...
वीरेन्द्रका फोटोले रुवायो नातिनीलाई
यो मन मेरो कैले बुझ्ने हो काठमाडौं, १८ पुस । नारायणहिटी दरबारभित्र नरसंहार हुँदा उनी मात्र तीन वर्षकी थिइन् । सायद आफ्नी आमाको धमिलो छवि मात्र उनको मानसपटलमा छ । १४ वर्षीया गीर्वाणी शाह आमाको त्यही धमिलो छवि मन मस्तिष्कमा लिएर गत शनिबार नेपाल आर्ट काउन्सिल पुगिन् । काउन्सिलमा आयोजित पूर्वराजपरिवारको तस्बिर प्रदर्शनी हेर्न बाबु गोरखशमशेरसित गएकी उनले सबै तस्बिरहरू हेर्न भने सकिनन् । आमाको तस्बिर हेर्दाहेर्दै भक्कानिएर रोइन् । तत्कालीन शाही चिकित्सक डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले ‘स्वर्गीय श्री ५...
‘गिरिजाले भन्नुभो प्रचण्ड र म भए पुग्छ’
प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख लामो समयपछि जनतामा खुसी छायो । दशकौँदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा उत्रिएको माओवादी यतिखेर गोकर्ण रिसोर्टमा थियो । अब, ऊ पनि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने मानसिकतामा थियो । ०६३ जेठ १२ गते सरकार र विद्रोही पक्ष पहिलोचोटि औपचारिक वार्ताका लागि टेबुलमा थिए । सरकारी वार्ताटोलीको सदस्य थिएँ म । द्वन्द्वसमाधान प्रक्रियाको एउटा हिस्सा बन्न पाउनु मेरा लागि पनि खुसीको कुरा थियो । सरकारले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भयो । द्वन्द्वले थिल्थिलो...
यसकारण कुटे प्रचण्डलाई
बाग्लुङ राजपुत–२ हो मेरो घर । २७ वर्षको भएँ । मेरी दिदी प्रतिभा कुँवर र दाजु टेकबहादुर कुँवर ०५६ देखि नै तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा लागे । मेरो बुबा प्रेमबहादुर कुँवर पनि जनयुद्धकै कारण विभिन्न मितिमा गरी चार वर्ष जेल पर्नुभयो । म बाग्लुङकै देवीस्थान–३ स्थिति देवीस्थान माविमा पढ्थेँ । हाम्रो परिवारै जनयुद्धमा लागेकाले सानैदेखि राज्यबाट मैले विभिन्न यातना भोग्नुपर्‍यो । ज्यान बचाउनै मुस्किल परेपछि १० कक्षा पढ्दापढ्दै भारतको पन्जाब पुगेँ । एक वर्षसम्म मैले त्यहीँ एक कारखानामा क्लिनर्सको काम गरेँ ।...
३३६ घन्टा जहाँको त्यहीँ
काठमाडौं - यथाशक्य चाँडो सहमतीय सरकारसहित निकासको प्याकेजमा सहमति जुटाउन बहुपक्षीय छलफल सुरु गरेका प्रमुख राजनीतिक दल अन्ततः १४ दिने (३३६ घन्टे) यात्रा जहाँबाट सुरु गरेका थिए, त्यहीँ छन्। पटकपटकका आग्रह अवज्ञा भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतीय सरकारमा सहमति जुटाउन अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गत मंसिर ८ गते दलहरुलाई आह्वान गरेका थिए। बहुपक्षीय छलफलसमेत नगरी सात दिन गुजारेपछि राष्ट्रपति यादवले मंसिर १४ गते उनीहरुकै आग्रहमा सात दिन थपेका थिए। दोस्रो चरणको सात दिनमा विभिन...
नेताको ग्रहदशा/नेताका कुण्डली
-ज्यो.कृष्ण भण्डारी, ज्यो. तुलसी भारद्वाज देशको असफलतासँग अहिलेका हर्ताकर्ता नेताहरूको जन्मकुण्डलीको कुनै सम्बन्ध होला कि नहोला ? के नेताहरूको ग्रहदशा बिग्रिएकै कारण मुलुकले अहिलेको अवस्था भोगिरहेको हो ? कि मुलुककै ग्रहदशा बिग्रिएको हो ? देशका मुख्य नेताहरूको जन्मकुण्डली हामीले दुई युवा ज्योतिषीलाई व्याख्या गर्न दियौँ । उनीहरूले नेतागणका कुण्डलीमा के देखे त ? (कांग्रेस सभापति तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सुशील कोइरालाको कुण्डली भने फेला परेन । नेताका कुण्डली पुष्मकमल दाहाल (प्रचण्ड) :...
केन्द्रीय कारागारका बन्दी युवतीसित ओछ्यानमा भेटिए
-टेकराज थामी काठमाडौं-सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका एक कैदी बागबजारस्थित एक गेस्टहाउसमा युवतीसँग यौन क्रियाकलाप गर्दागर्दै पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने डाँका मुद्दामा डेढ वर्षदेखि कैद भुक्तान गरिरहेका सुनील तामाङ हुन् । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई बागबजारस्थित लोटस गेस्टहाउसमा पक्राउ गरेको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार तामाङलाई प्रहरी टोलीले बिहीबार दिउँसो १२:३० बजे पक्राउ गर्दा उनी युवतीसँग ओछ्यानमा थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार उन...
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादव र आफ्नै पार्टी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले योजनाबद्ध तरिकाले आफूलाई बर्खास्त गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार आफूनिकट नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति यादव र अध्यक्ष दाहालको मिलिभगतमा आफूलाई बर्खास्त गर्ने योजना बनेको र त्यसलाई जसरी पनि विफल पार्नुपर्ने बताएका थिए। 'राष्ट्रपति र अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) बीच दमननाथ ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाउने...